केपी शर्मा ओलीको दादागिरि चरित्र
केपी शर्मा ओलीको दादागिरि चरित्र - Nepal Talk
चैत्र १२ गते, २०७७ मा प्रकाशित
केपी ओली राजनितीको खोलमा अभद्रको नाङगो शैली देखाउने शाशक हुन् । २०५१ सालमा नेकपा एमालेको नौ महिने सरकारमा ओलीले गृहमन्त्री पद पाए । २०६४ सालमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए, ओली उपप्रधानमन्त्री, २०७२ सालमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । जम्माजम्मी गरि ओली तिन पटक सत्तामा पुगे । चिनको बैशाखि टेकेर उकालो लागेको प्रधानमन्त्रीको एक कार्यकाल नसकिदै उनको यात्राले नेरन्द्र मोदिको पाठशाला समायो ।
उतिखेर ओली नेपालको महामहिम हुने सपनामा चिनका राष्ट्रपती सि जिङपिङको उठबसमा लागे । अहिले ओलीले खाएको थालमा चुठेर थुकेका छन् । यानकि उनको राजनितिक साँठगाँठ फेरिएको छ । यतिखेर प्रधानमन्त्री ओली भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदिको यसम्यान भन्दा फरक नपर्ला ।
संयोग भनौ कि के ? नेकपाभित्र विवादको आगो जति दन्कियो उती ओली मोदीका बिश्वाशपात्र बन्दै गइरहेका छन् । संसद बिघटन गरेताका तिर चिँनिया टोली नेपाल आउदा ओलीले बेवास्ता गरेका समाचारहरु पनि बाहिरिएका थिए, भने त्यतीखेरै जि न्युजका पत्रकारसंग ओलीले अन्र्तवार्ता दिएका पनि थिए, उक्त कुराले सामाजिक सन्जाल अत्यन्तै ततायो । अलि पहिले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा अग्रज पत्रकारले भनेका थिए कि, ‘केपी शर्मा ओलीको हर्कतले व्यवसायीहरुलाई आँंतकित बनाएको छ ।’ उनले भनेका थिए । ‘प्राइभेट नम्बरबाट फोन आउछ , म गुह मन्त्रालयबाट, यति दिनुस र उति भनेर बार्गेनिङ सुरु हुन्छ, नत्र….. भनेर धम्की आउछ यो कस्तो सरकार हो ?यो हेर्दा लाग्छ उनी रअको नेतृत्व गरिरहेका छन कि प्रधानमन्त्रीको? प्रश्न नजावाफ बनिरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको रफ शैलीले सबैलाई त्राहिमाम बनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले उखान र टुक्काले दुइचार जना आसेपासेको तालि खाएका छन भने भारतको ब्याक सपोर्टमा राजनिती टिकाएका छन् । त्यहि व्याक सपोर्टमा उनको बिरामी शरिरमा एनर्जी बढेको छ । उनको बढदो उच्छङखल खालको अभिव्यक्ती र गैरजिम्मेवारी पुर्ण व्यवहारहरुले ओलीको खराब चरित्रको परिभाषा दिइरहेको छ । सत्ता लोलुपोताका लागि जतिखेर जसलाई पनि दाउमा राख्न सक्ने हुर्मत भएका ओलीको असली नियत त दादागिरी नै हो ।
सार्वजनिक कार्यक्रममा जाँदा किन डराउछन् प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले म सहभागि भएको फलानो कार्यक्रममा चाँहि फोटो खिच्न नदिनु भने । सुन्दा नमिठो लाग्दो यो अभिव्यक्क्ती उनले पहिलो पटक बोलेका भने होइनन् । संसद बिघटन भएदेखि यता मिडियामाथी अँकुस लगाउने खालका यस्ता अभिव्यक्तीहरु पटक पटक आउदा मिडियासंग प्रधानमन्त्री ओली अलग हुन खोजेको हो कि भनेर अनुमान लगाउन अप्ठेरो छैन् । शाशकले असत्य छोप्न पहिलो हस्तक्षप मिडियालाई गर्ने गर्दछ ।
सर्बसत्तावादि शाशन भएको मुलुकमा मिडियाहरु सरकारको मुखपत्र बन्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका हरेक गतिबिधी विवादित बन्दै आएको कारण पनि उनले मिडियासंग खुटटा कमाएको अथवा डराएको नहोला भन्न सकिदैन् । त्यसो त उनकै कार्यकालमा आमसन्चारलाई खुम्च्याउनका लागि मिडिया बिधेयक ल्याएका थिए ।
उक्त विधेयकको प्रेश काउन्सीलका तत्कालिन अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले त खुलेरै बिरोध गरेका थिए । देशभरका भएभरका पत्रकार र ठुला मिडियाका सम्पादकहरु उक्त बिधेयकले चिढिए भने मानबअधिकार आयोगकी सदस्य महना अनसरीले समेत असन्तुष्टी जाहेर गरेकी थिइन् ।
हालै प्रधानमन्त्रीले आफु सहभागी सार्वजनिक कार्यक्रममा मोबाइल फोनबाट फोटो–भिडियो नखिच्न सूचना दिइएको छ । ललितपुरको जावलाखेलस्थित स्टाफ कलेजमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पशुपन्छीजन्य उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर भएको घोषणा गर्ने कार्यक्रममा कृषि मन्त्रालयका उपसचिव प्रदीप कुमार भट्टराईले कार्यक्रम शुरू हुनु पूर्व यस्तो जानकारी गराएका थिए ।
झुट बोल्दै प्रधानमन्त्री
पशुपन्छीजन्य उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर भएको घोषणा गर्ने कार्यक्रममा आफुलाई बिवादित बनाइएला अथवा कुनै ट्रोलको शिकार बनाउलान कि भनेर उनले कार्यक्रम पुर्व नै यो चतु¥याई गरेको हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले भोली नै आत्मनिर्भर भनेर घोषणा गरेको विषयमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी आर्यालले आगामी पाँच बर्षभित्रमा मुलुक आत्मनिर्भर बनाउने भनेकी थिइन् । मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको कुरो नै यसरी बाझिएको छ कि जसले गर्दा जनता अलमलिन्छन् ।
प्रधानमन्त्रीले पशुपन्छीजन्य उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर भयो भनेको कुरालाई सरकारी विवरणले असत्य सावित गरिदिएको छ । पछिल्लो ५ वर्ष ३ महिनामा भारतसँग नेपालको व्यापार घाटा ३३ खर्ब ५३ अर्बभन्दा बढी छ । सो अवधिमा २ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँको वस्तु भारत निर्यात गर्दा भारतबाट नेपालले ३५ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको वस्तु आयात गरेको छ । यसरी हेर्दा त प्रधानमन्त्रीले आत्मनिर्भर भनिएका कुरा गलत प्रमाणित भएको छ । उनी आफनो गलत छोप्न मिडियालाई पन्छाइरहेका छन् । यो जति लाटाले पनि अडकल लगाउन सक्ने कुरा हो । सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारा सफल बनाउन उनले एकपछि अर्काै झुट बाडिरहेका छन् ।
दुइ महिना पहिले पनि उनले कर्णालीलाई तुइनमुक्त बनाए भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलेका थिए तर पछि राससले कर्णलीमा तुइनबाट खसेर ज्यान गयो भन्ने समाचार प्रकाशित गर्याे । प्रधानमन्त्रीले सत्य लुकाएर असत्यको भ्रम फैलाउदा त मिडियासंग भन्दा पनि जनतासंग डराउन पथ्र्यो । मिडियासंग इगो साँधेर क्यामेरा र मोबाइलको स्विच बन्द गराउनु भन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीले जनताको मतको हिसाबकिताब राखेर काम गर्न जरुरि छ । जनताले प्रधानमन्त्रीलाई झुट बोलेको सुहाउला तर प्रधानमन्त्रीले झुट बोलेको सुहाँउदैन् । प्रधानमन्त्रीको कुर्सिसंग देशको सम्प्रभुत्ता गासिएको छ । देशको भविष्य जोडिएको हुन्छ ।